Breaking News - Yangon Nation News
Breaking News , January 13, 2021
ဦး​ကျော်သူ ကိုယ်တိုင် မောင်းလာသည့် နာရေးကူညီမှုအသင်း နိဗ္ဗာန်ယာဉ်အား ရှေ့ဘေးမှ ကားငါးစီးဆင့်ကာတိုက်ခံရ (ဖြစ်စဥ်ကို ဥက္ကဌ ဦး​ကျော်သူက အခုလို ရှင်းပြထားပါတယ်) ကားငါးစီးဆင့်ကာ ဆင့်ကာတိုက်သော်ငြား……… ဘာမှ မပူပါနဲ့။ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ ဗုဒ္ဓဘုရား နှလုံးသား...
Breaking News , January 09, 2021
✈️ 🇮🇩 #အင်ဒိုနီးရှားလေယာဉ်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်။ Sriwijaya လေယာဉ်ဟာ ဂျာကာတာမြို့တော်ကပျံတက်ပြီး မကြာခင်မှာ အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားစံတော်ချိန် နေ့လည် ၂ နာရီ၄၅ မိနစ်မှာ ပျံတက်ခဲ့ပြီး Pontianak ကို ညနေ ၄ နာရီ ၁၅...
Breaking News , December 08, 2020
၈.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၇ ၃၇ အချိန်ခန့်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ မဟာစေတီလမ်း၊ မန်းကျည်းထူကျေးရွာအနီး၊ ဆီဇုန်တွင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိသဖြင့် ပုသိမ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မီးသတ်စခန်းများမှ မီးသတ်ယာဉ်များ ထွက်ခွာလျက်ရှိပါသည်။ Update ၁၈ ၄၀အချိန် မီးထိန်းပါသည်။...
Breaking News , November 07, 2020
၆.၁၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၃၁၀/၀)နှင့်(၃၁၀/၁)ကြားတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေတိုက်စားမှုဖြစ်ပေါ်ကာ လမ်းလယ်ကျွန်းအနီး လမ်းပိုင်းမှ စတင်မြေကျွံ၍ လမ်းခါးကျိုးမြေကျွံကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ ပြင်စည်အမြန်လမ်းမီးသတ်စခန်းမှ သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြင်စည်အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်းမှ...
မန္တလေးတိုင်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ ပရန်တော်ချောင်းရေလျှံ
Breaking News , November 05, 2020
(၄.၁၁.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ ပရန်တော်ချောင်းရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များတို့ဖြင့် သွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Source MFSD
“ဦးဝီရသူ အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ လာရောက်အဖမ်းခံ”
Breaking News , November 02, 2020
“ဦးဝီရသူ အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ လာရောက်အဖမ်းခံ” နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုပုဒ်မ၁၂၄-ကဖြင့် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရသည့် ဆရာတော်ဦးဝီရသူသည် ယနေ့တွင် အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၌ လာရောက်အဖမ်းခံခဲ့ပါတယ်။ ဦးဝီရသူသည် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများအပေါ် မဖွယ်မရာစကားလုံးများသုံးနှုန်းပြောဆိုခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော် တရားရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးစသည့်ကဏ္ဍများမှ တာဝန်ရှိသူများအပေါ်အကြည်ညိုပျက်အောင် ပြောဆိုမှုကြောင့် အနောက်ပိုင်းခရိုင်ဒုအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစန်းမင်းက တရားလိုပြုလုပ်၍ နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်...
“တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လို့ ဗီယက်နမ်မှာ ၈ယောက်သေ၊၄၂ယောက်ပျောက်ဆုံး”
Breaking News , October 29, 2020
“တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လို့ဗီယက်နမ်မြေပြိုမှုမှာ၈ယောက်သေ၊၄၂ယောက်ပျောက်ဆုံး” October 29, 2020 ဟနွိုင်းမြို့၊ဗီယက်နမ် (AP)တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း မိုလေ့(ဗ်) တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဗီယက်နမ် အလယ်ပိုင်းမှာ လူ၈ယောက်သေဆုံးပြီး၊အနည်းဆုံး၄၂ယောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ် လို့နိုင်ငံသတင်းဌာနတွေက သောကြာနေ့မှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ကွာအန်နမ်ပြည်နယ် တောင်ဘက်အလယ်ပိုင်း ထရာဗန်မှာရှိတဲ့ ထရာဗန်ကျေးရွာမှာ မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွါးခဲ့တာ ကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေက...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နောက်ဆုံး အခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ပြည်သူများသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည့် မိန့်ခွန်း
Breaking News , October 23, 2020
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နောက်ဆုံး အခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ပြည်သူများသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည့် မိန့်ခွန်း
မန္တလေး UAB ဘဏ် ဓားပြတိုက်သူနေအိမ်မှ ဘောစေ့ထည့် ပစ်ခတ်ရသည့် ကော်သေနတ်နှင့် ငွေကျပ် ၁၉၉ သိန်း သိမ်းဆည်းရမိ
Breaking News , October 22, 2020
မန္တလေး UAB ဘဏ် ဓားပြတိုက်သူနေအိမ်မှ ဘောစေ့ထည့် ပစ်ခတ်ရသည့် ကော်သေနတ်နှင့် ငွေကျပ် ၁၉၉ သိန်း သိမ်းဆည်းရမိ မန္တလေး UAB ဘဏ် ဓားပြတိုက်မှု သတင်းဆက် နာရေးကိစ္စရှိနေသောကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ နေအိမ်ကို အသေးစိတ်...
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ နေပြည်တော်တွင် မဲ ပေးမည် နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၂၂ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ အနေဖြင့် နေပြည်တော်တွင် ဆန္ဒမဲ ပေးမည် ဖြစ်ပြီး ကြိုတင်မဲ ပေးရန်အတွက် ပုံစံ (၁၅) ဖြင့်...